Microsoft naWarner Bros vakakwanisa kuchengeta iyo yekutanga Superman bhaisikopo pane girazi dhisiki | Linux Vakapindwa muropa
Vhiki rino, Microsoft naWarner Bros, vakasaina chibvumirano chekuvandudza mhando nyowani yekuchengetedza. Iyi mhando nyowani yekuchengetedza yakavhurwa nekopi yakazara yeiyo yekutanga Superman bhaisikopo of 1978 mumudziyo wegirazi nematanho anotevera (75 x 75 x 2 mm).
Mune iyo 1978 Superman bhaisikopo, gamba rinowana mameseji akasiiwa nababa vake akachengetwa mumakristasi akachengetwa muNhare yeSolitude muArctic. Zvichida ndosaka Microsoft, mukubatana naWarner Bros, yakasarudza iyi bhaisikopo kuratidza tekinoroji nyowani yekuchengetera inonzi »Silica Project», chirevo kune yakasvibirira girazi.
Ichi chigadzirwa chegirazi inogadzirwa neyakajairwa quartz uye ine 75,6 GB yedata. Microsoft yakaburitsa pachena kuti yakabikwa, kubikwa uye kukweshwa kuyedza simba rayo. Iyo yekutsvagisa chirongwa, Project Silica, yakagadzirirwa kuchengetedza data uye kuchengetedza.
Kupatsanurwa kwekambani yeMicrosoft inoshanda pakutsvaga kwemakomputa, inozivikanwawo se Microsoft Tsvagurudzo iri pamoyo peiyi "nyowani inotonhora chishandiso yekuchengetedza yakagadzirwa negirazi inova chikamu chemari hombe neboka rekuvandudza tekinoroji yekuchengetedza iyo mune ramangwana inogona kubatanidzwa mune yayo Azure chikuva.
Iyo kambani yakatsanangura kuti ivo vaishandisa infrared lasers kukodha data. en «voxels«, Iyo-mativi matatu akaenzana nemapikisheni pane edu akajairwa skrini. Iyo data inochengeterwa mugirazi uye muchina kudzidza algorithms inogona kusarudza mapatani ekuverenga iyo data.
Microsoftt ichiri kugadzira tekinoroji iyi uye ichangobva kuburitsa basa nyowani tsvakurudzo nezve chirongwa cheSilica. Parizvino, maitiro akagadzirwa neMicrosoft anodhura uye akaomarara. Zvisinei, vatsvakurudzi vekambani vari kuedza kukurumidza uye kuderedza mari inoshandiswa.
"Kuchengeta iyo yose 'Superman' firimu mugirazi uye kugona kuiverenga zvinobudirira chiitiko chakakosha," akadaro Mark Russinovich, mukuru wezve tekinoroji weMicrosoft Azure. "Handisi kuti mibvunzo yese yakapindurwa zvizere, asi zvinoita sekunge tava muchikamu chatiri kushanda pakunatsiridza nekuyedza, pane kubvunza mubvunzo kuti 'tinogona kuzviita here?'"
Vicky Colf, Warner Bros Chief Technology Officer Iye akati nezve tekinoroji:
"Kana ichitishandira, tinotenda zvakasimba kuti zvichava zvakanakira chero munhu anoda kuchengetedza nekuchengetedza zvirimo."
Zvave zviri dambudziko rekuchengetedza kwemakumi emakore. Mifananidzo inopera nekufamba kwenguva, mabhuku anoora, uye kunyange maCD nemadhiraivhi akaomarara haisi nzvimbo dzakanakisa dzekuchengetedza zviyeuchidzo zvedu zvemadhijitari. Tsvagiridzo yakaedza kugadzirisa dambudziko iri kweanopfuura makore mashanu Uye Microsoft zvirokwazvo haisi yekutanga kugadzira girazi disk chengetedzo.
Zvidzidzo zvekare zvakaratidza izvozvo Kuchengetedza mugirazi kunopa inonakidza yekuchengetedza zvivakwa zvine kudziya kwakasimba kusvika ku1000 ° C., hupenyu husingagumi pane imwe tembiricha (13.8 emakore bhiriyoni pa190 ° C) uye inosvika ku360 TB / disk.
Seyakadzikama uye yakachengeteka fomu yeinotakurika ndangariro, ltekinoroji inogona kubatsira zvakanyanya kumasangano ane mafaera mahombe, senge dura renyika, mamuseum uye maraibhurari, kuchengetedza ruzivo rwako uye zvinyorwa. Iyo tekinoroji yakatanga kuratidzwa kuyedza muna 2013 apo kopi yedhijitari ye300 kb mameseji faira rakabudirira kunyorwa mu5D.
Rutsigiro rwakasimba rweMicrosoft rweiyi tekinoroji zvinoreva kuti makambani anogona kuwana chakakomba nezve iyi nyowani yekuchengetedza nzira yezvavanoda zvakanyanya kuomarara.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti, sechikamu chehurongwa hwayo hwekuchengetedza zvachose zvinhu zvayo zvemadhijitari uye kuchengetedza izvo zvemadhijitari zvainoburitsa, kambani yevaraidzo Warner Bros parizvino iri kugadzira makopi mazhinji emabasa aya ekuchengetedza, dzimwe dzadzo nekushandura kopi yedhijitari kuita firimu yeanalog uye kuigovanisa muzvikamu zvitatu zvemavara kuendesa imwe neimwe kune yakasviba neyechena zvisizvo zvisingadzimike semavara mafirimu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Microsoft naWarner Bros vakakwanisa kuchengeta iyo yekutanga Superman bhaisikopo pane regirazi disc
Hongu changamire! Hapana chinhu chakachengeteka kupfuura kuchengeta irreplaceable ruzivo ... pane ndiro yegirazi.